Gudiga Soo Dhawaynta Qurbajoogta Oo Kulan Deg-deg ah Yeeshay - Cakaara News
Gudiga Soo Dhawaynta Qurbajoogta Oo Kulan Deg-deg ah Yeeshay
Jigjiga(Cakaaranews) Jimce, 21ka October 2016. Shir deg-deg ah oo ay maanta yeesheen Gudiga soo dhawaynta qurbajoogta ee shirwaynaha 9, aad ee XDSHSI oo uu gudoomiye uyahay mudane Farxaan Maxamed Cali ujeedadiisuna ahayd sidii marti-sharafta qurbajoogtu ay uga soo qaybgali lahaayeen shirwaynaha 9, aad ee XDSHSI ayaa falanqayn iyo dood dheer oo ay dhan walba ka eegeen kadib wuxuu gudigu islaqaatay go’aanadan hoos kuxusan:
1.Wuxuu gudigu mahadcelin balaadhan kasameeyay sida ay qurbajoogtu uga qaybqaadatay mudaaharaadyadii lagaga soo horjeeday ururada nabad-diidka ah ee Onag, Ginboot7, Alqushaash, Ubbo IWM. Wuxuuna xusay kaalinta libaax ee ay qurbajoogtu kulahayd kaguulaysiga cadawga naftanyaaga ah iyo inay sidoo kale dastuurka dalka iyo calankaba kor uqaadeen. Sidaadarteed, ayaa waxay gudigu go’aamiyeen in lasharfo hadii ay dibada jiraan iyo hadii ay gudaha joogaanba.
2.In mar kasta ahmiyad lasiinayo xubnaha sida gaarka ah guulaha uga soo hoyiyay ladagaalanka Ubbo, Alqushaash, itixaad, Onag, Ginboot7 IWM.
3.Xubnaha wadanka gudihiisa hantida kusoo maalgashaday islamarkaana sameeyay shaqo-abuurka.
4. Xubnaha wadanka gudihiisa kasameeyay hawlaha samafalka.
5.Saraakiisha sar-sare ee social mediaga kadhex-halgama. Kuwaas oo isugu jira: janaralo, kornelo, shaalaqeyaal iyo shaambalo rag iyo dumarba leh.
6.Guurtida odayaasha madaalayaasha ah ee wadaninimadu lafta kaga jirto islamarkaana tooshka kushiday dhibaatadii iyo xasuuqii dhargigu kuhayay shacabka soomaalida itoobiya.
7.Xubnihii kaqaybgalay mudaaharaadyadii kor loogu qaadayay dastuurka, calanka iyo nidaamka federalismka ah islamarkaana lagaga soo horjeeday dhargigii, Onag iyo Ginboot7.
Hadaba iyadoo ay sidaas tahay ayaa wuxuu gudigu islaqaatay in qurbajoogtu ay mutaysteen inay kaqaybgalaan shirwaynaha 9, aad ee XDSHSI islamarkaana ay jaaliyad kasta usoo dirsato wakiilo. Wuxuuna gudigu maanta ukalaqeexay mas’uuliyada gudiga iyo waajibaadka xubnaha qurbajoogta ah ee kasoo qaybgalaya shirwaynahan 9, aad sidan:
Gudigu: wuxuu qaadanayaa laga bilaabo 25ka October ilaa 5ta November ee sanadkan kharashka kubaxaya xubnaha qurbajoogta ah ee kaqaybgalaya shirwaynaha sida: jiifka, cuntada iyo Ticketka Go and Back from Addisababa to Qabridahar.
Xubnaha Qurbajoogtuse: waa inay iskabixiyaan ticketka wadanka ay ka imanayaan ilaa Addisababa oo Go and Back ah.
FG: Qoondaha tirada jaaliyad kasta uga qaybgalaysa shirwaynuhu waa 5 qof. Ugu badnaana 7 qof oo kakooban 4 dumar ah iyo 3 rag ah. Waxaanse iyagu tiradan kujirin oo kadheeri ah: gudoomiyaha jaaliyada, gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiyaha ururka horumarinta soomaalida itoobiya oo 10 kunoqonaya tirada lasoo xulayo.
FG: waxaa xubnaha soo xulaya wakaalada xidhiidhka arimaha qurbajoogta DDSI iyo gudoomiyaha qurbajoogta oo kali ah. Balse, waxaa maamulada jaaliyadaha looga baahan yahay inay xubnaha lasoo xulay soo gudbiyaan kahor wakhtiga imaanshaha.
FG: shirkada duulimaadyada hawada ee Ethiopian Airlines waxay qurbajoogta ugu deeqday 30% oo discount ah. Laakiin waa marka ticketyada laga goosto xafiisyadeeda ee ma aha marka laga goosto agencyada(not agencies). Qurbajoogtuna waxay bixin 70%.